Ihhovisi leSilo nesexwayiso kwabepolitiki
IHHOVISI leSilo uMisuzulu kaZwelithini selikhiphe isexwayiso esishubile emaqenjini ezepolitiki kulandela isenzo se-IFP sokufaka isithombe seSilo kwesinye sezikhangiso sayo sokhetho lohulumeni basekhaya. Isithombe: Khaya Ngwenya/African News Agency(ANA)
Sabelo Nsele | October 13, 2021
IHHOVISI leSilo uMisuzulu kaZwelithini selikhiphe isexwayiso esishubile emaqenjini ezepolitiki kulandela isenzo se-IFP sokufaka isithombe seSilo kwesinye sezikhangiso sayo sokhetho lohulumeni basekhaya.
Isenzo se-IFP sithukuthelise ihhovisi leSilo, lisola i-IFP ngokusebenzisa iMbube ukufeza izinhloso zepolitiki.
Okhulumela ihhovisi leSilo, uMntwana uThulani Zulu, uthe iSilo kasihlangani nezinto ezithinta ipolitiki.
“Ihhovisi leSilo samaBandla lifisa ukucacisa bha ukuthi selokhu kwathi nhlo iNgonyama yamaZulu ayikaze yasetshenziswa ukuqhuba izinhloso zepolitiki.
“Leli hhovisi liyanxusa ngokukhulu ukuzithoba ukuba amaqembu ezepolitiki ayeke ukusebenzisa isithombe noma yimiphi imifanekiso ehlobene nendlunkulu kaZulu emikhankasweni yezepolitiki.
ISilo kuyaziwa kahle kamhlophe ukuphi singaphezu kwezindaba nemikhankaso yezepolitiki.”
UMntwana uThulani uthe abaqhubeka nalo mkhuba bimbenge yomile.
“Ihhovisi lixwayisa ukuthi uma lokhu kuqhubeka kungaholela ekutheni ihhovisi lifune izeluleko zomthetho ngalesi senzo esibi kangaka.” Isikhangiso se-IFP esinesithombe seSilo, sihambisana nombhalo othi le nhlangano iyasebenzisana nabaholi bomdabu.
Lo mbhalo abaningi bawuhumushe ngokuthi i-IFP igudla uhulumeni waKwaZulu- Natal, osanda kuthatha isinqumo sokungayixhasi imikhosi yasendlunkulu njengoba kusaqhubeka umdonsiswano wesihlalo sobukhosi bukaZulu.
NgoMsombuluko ntambama i-IFP imemezele ukuthi iyasihoxisa isikhangiso kulandela umsindo oqubuke ezikhundleni zokuxhumana. Esitatimendeni, le nhlangano ithe isithombe seSilo sisetshenziswe ngephutha.
"Sithanda ukushweleza kwiSilo, indlunkulu kaZulu nakundunankulu kaZulu.
Abasebenzi abathintekayo bazothathelwa izinyathelo zokuqondiswa ubugwegwe," kusho isitatimende esikhishwe i-IFP.
Lesi sitatimende asiyisindisanga i-IFP olakeni lwe-ANC KwaZulu-Natal.
Okhulumela i-ANC KwaZulu- Natal, uMnuz Nhlakanipho Ntombela, uthe lesi senzo se-IFP sibashiye beshaqekile.
UNtombela uthe kunzima ukukholwa wukuthi i-IFP inqume ukusebenzisa isithombe seSilo ukunxenxa amavoti.
"Lena yimizamo nje yokudida abavoti. Kade sasisho ukuthi i-IFP kufanele iyeke ukusebenzisa ukusondelana kobengumholi wayo, inkosi Mangosuthu Buthelezi, neSilo, ukufeza izinhloso zayo zepolitiki.“
Sekunesikhathi eside i-ANC ne-IFP begudlana ngombango weisihlalo sobukhosi bukaZulu.